Tour Operator Archives - Glory Assumption Space
Tour Operator – Female (10) Posts
Salary Rang : 250000-300000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Travels & Tours Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Tour Operator – Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဂျပန်ဘာသာစကားတတ်မြောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ •	လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်လည်း သင်ကြားပေးမည်။ •	ရိုးသားပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိပြီး အသက် (၃၀)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00 PM ) •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Tour Operator – M/F (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travel & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Tour Operator – M/F (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ရန်ကင်းမြို့ နယ်။
- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer ရရမည်။ - အသက် (၂၈) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Tour Operator ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။
Tour Operator – Female (5)Posts/Salary – 250,000 Kyats
Location in : Botahtaung Township
Salary Rang : 250000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောConstruction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။ စနေနေ့တစ်ဝက်ပိတ်သည်။ 1. Tour Operator – Female (5)Posts/Salary – 250,000 Kyats /Botahtaung Township - ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀ မှ ၃၀) ကြားဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာ4Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer (MS Package) , Internet & Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် လုပ်ဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အထက်လူကြီးမှ ပေးအပ်သော တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ Supplier များနှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအား တာဝန်ယူရေးဆွဲနိုင်သူ၊ ဈေးနှုန်းများတွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Tourism လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူအနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ– Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းကမာရွတ်မြို့နယ်။
Tour Operator - Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောConstruction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။ စနေနေ့တစ်ဝက်ပိတ်သည်။ Tour Operator – Female (5)Posts/Salary – 250,000 Kyats /Botahtaung Township - ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀ မှ ၃၀) ကြားဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာ4Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer (MS Package) , Internet & Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် လုပ်ဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အထက်လူကြီးမှ ပေးအပ်သော တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ Supplier များနှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအား တာဝန်ယူရေးဆွဲနိုင်သူ၊ ဈေးနှုန်းများတွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Tourism လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူအနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ– Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းကမာရွတ်မြို့နယ်။
Location in :
Salary Rang :
လှည်းတန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Tour Operator ( Female /Male ) -	Any Graduate -	Experience2Year အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.-09-262223784, 09 262223785,09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ - အမှတ် (၂၉) ပထမထပ်၊လှည်းတန်းခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Location in : Bahan
GAS အတွက် ကမာရွတ် မြို့နယ် နှင့် ဗဟန်း တွင် ရှိသော ရုံး ၂ ရုံး အတွက် ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ - Tour Operator (M / F ) . ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ ( ၁ ) ။ ။တိုက်(၆) ၊အခန်း (၁၀၄ ) ၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ဗိုလ်ချို (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ နေရာ (၂ ) ။ ။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Tour Operator (M/F)1-Post
-ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ -စကားပြာပြေပြစ်ရမည်။ -လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၂) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားရန် ။